यामाहाको सुपरमोडल ‘फेसिनो’ स्कुटर बजारमा | .:: Welcome || Paryatannews
Home » अर्थ » यामाहाको सुपरमोडल ‘फेसिनो’ स्कुटर बजारमा
यामाहाको सुपरमोडल ‘फेसिनो’ स्कुटर बजारमा
काठमाडौं । यामाहाको नया“ स्कुटर ‘फेसिनो’ नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । नेपालका लागि यामाहाको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ‘यामाहा फेसिनो’ स्कुटर भिœयाएको हो ।
काठमाडौंमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा एमएडब्ल्यूका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुकुमार अग्रवालले उक्त स्कुटर सार्वजनिक गरे । फेसिनोको क्षमता र डिजाइन आधुनिक भएकाले यसले सबैखाले स्कुटरप्रेमीको ध्यान खिच्ने उनको भनाइ छ । फेसिनोको आगमनस“गै नेपाली स्कुटर बजारमा ३० प्रतिशत हिस्सा यामाहाले ओगेट्ने लक्ष्य लिइएको उनले बताए । क्षमतास“गै स्टाइल, स्पेस, स्टाटसका लागि फेसिनो उत्कृष्ट रहेको अग्रवालको दाबी छ । नेपाली बजारमा फेसिनोको मूल्य १ लाख ८३ हजार ९ सय रुपैया“ तोकिएको छ ।
ब्लू कोर प्रविधिमा आधारित यामाहा फेसिनो स्कुटर १ सय १३ सिसी क्षमताको रहेको छ । यस स्कुटरमा ५ दशमलव २ लिटर क्षमताको ट्याङकी रहेको छ । यसले प्रतिलिटर ६६ किलोमिटर माइलेज दिने कम्पनीले जनाएको छ । फेसिनोको यो माइलेज अन्य स्कुटरका तुलनामा सबैभन्दा बढी भएको एमएडब्ल्यूका बजार व्यवस्थापक निर्मल श्रेष्ठकोे दाबी छ । फेसिनो स्कुटरको इञ्जिनमा निकल स्पार्क प्लक र बिए २४ कार्बरेटर प्रयोग गरिएको छ । यसले स्कुटरको गतिलाई उत्कृष्ट बनाउ“छ ।
फेसिनोमा आकर्षक तरिकाले हेडलाइट, मिटर र क्रोम साइड मिरर जडान गरिएको छ । यसले स्कुटरको डिजाइनलाई आकर्षक देखाएको छ । यस स्कुटरमा प्रयोग गरिएको लामो र सुविधाजनक सिटमा दुईजना व्यक्तिले आरामदायी यात्रा गर्न सक्छन् । सिटमुनि राखिएको २१ लिटर क्षमताको स्टोरेजले स्कुटर प्रयोगकर्तालाई हेल्मेटलगायत सामग्री राख्न सहजता दिलाउ“छ । त्यस्तै, स्कुटरमा २ सय २० एमएमको लेग स्पेस (खुट्टा) राख्ने ठाउ“ रहेका छन् । नेपाली बजारमा यामाहा फेसिनो रफ रेड, स्यासी स्यान, हउट ह्वाइट, कुल कोबाल्ट र टक्सेडो ब्ल्याक गरी विभिन्न ५ रङमा उपलब्ध रहेका छन् । स्कुटरको कुल तौल १ सय ३ केजी रहेको छ ।
यामाहाको सुपरमोडल ‘फेसिनो’ स्कुटर बजारमा Reviewed by Shiva Shrestha on Sep 18 . काठमाडौं । यामाहाको नया“ स्कुटर ‘फेसिनो’ नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । नेपालका लागि यामाहाको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ‘यामाहा फेसिनो’ स्कुटर भ काठमाडौं । यामाहाको नया“ स्कुटर ‘फेसिनो’ नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । नेपालका लागि यामाहाको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ‘यामाहा फेसिनो’ स्कुटर भ Rating: 0